२.६५% घटेर २६८५.४२ विन्दुमा नेप्से, ५ अर्ब १२ करोड बराबरको शेयर खरीदविक्री
२०७८ असोज, ११
असोज ११, काठमाडौं । साताको दोस्रो कारोबार दिन सोमवार पनि नेप्से परिसूचक अघिल्लो कारोबार दिनको तुलनामा २ दशमलव ६५ प्रतिशत अर्थात् ७३ दशमलव शून्य ५ अंकले घटेको छ ।
यो दिन नेप्से परिसूचक २ हजार ६८५ दशमलव ४२ विन्दुमा झरेको हो । यो दिन काराबोरमा आएका २२७ ओटा धितोपत्रको १ करोड ४ लाख ७८ हजार ६८ कित्ता शेयरको ६७ हजार ५८७ पटकमा रू. ५ अर्ब १२ करोड ९ लाख ७३ हजार बराबरको खरीदविक्री भएको छ । कारोबारमा आएका १३ ओटा समूहको परिसूचक घटेसँगै समग्र नेप्से परिसूचक घटेको हो ।
कारोबारमा आएका २२७ ओटा धितोपत्रमध्ये दुई ओटा कम्पनीको शेयरमूल्यमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ । मनकामना स्मार्ट लघुवित्त वित्तीय संस्था र मैलुङ खोला जलविद्युत कम्पनीको शेयरमा सकारात्मक सर्किट लागेको हो ।
मनकामना स्मार्ट लघुवित्तको शेयरमूल्य अघिल्लो कारोबार दिनको तुलनामा ९ दशमलव ९९ प्रतिशत र मैलुङखोला जलविद्युत् कम्पनीको शेयरमूल्य ९ दशमलव ९७ प्रतिशतका दरले वृद्धि भएसँगै सकारात्मक सर्किट लागेको हो । मनकामना स्मार्ट लघुवित्तको शेयरमूल्य प्रतिकित्ता रू. १ हजार ५९३ दशमलव ७० र मैलुङ खोलाको रू. २२६ दशमलव २० पुगेको छ ।
यो दिन शेयरमूल्य सर्वाधिक घट्नेमा गुडवील फाइनान्स रहेको छ । कम्पनीको शेयरमूल्य अघिल्लो कारोबार दिनको तुलनामा ७ दशमलव ८३ प्रतिशत घटेको छ । कम्पनीको शेयरमूल्य प्रतिकित्ता रू. ६७१ मा झरेको हो ।
त्यसैगरी, सर्वाधिक शेयर खरीदविक्री भने अरुण भ्याली हाइड्रोपावरको भएको छ । कम्पनीको रू. १५ करोड ४९ लाख ७१ हजार बराबरको शेयर खरीदविक्री भएको हो ।
सर्वाधिक शेयर कारोबार हुने दोस्रो कम्पनीमा युनाइटेड मोदी हाइड्रोपावर रहेको छ । कम्पनीको रू. १३ करोड ५१ लाख बरावरको शेयर खरीदविक्री भएको छ । सोमवार पनि सबैभन्दा बढी वित्त समूहको परिसूचक ४ दशमलव ५३ प्रतिशत घटेको छ ।
त्यसैगरी बैंकिङ समूहको परिसूचक २ दशमलव २६ प्रतिशत, ब्यापार समूहको १ दशमलव ३५ प्रतिशत, होटल एण्ड टुरिजम समूहको २ दशमलव ८ प्रतिशत, विकास बैंक समूहको ३ दशमलव ८१ प्रतिशत,हाइड्रोपावर समूहको २ दशमलव ६८ प्रतिशत,निर्जीवन बीमा समूहको ३ दशमलव ६२ प्रतिशत, उत्पादन तथा प्रशोधन समूहको १ दशमलव ६१ प्रतिशत, अन्य समूहको २ दशमलव ६५ प्रतिशत, लघुवित्त समूहको २ दशमलव ५७ प्रतिशत, जीवन बीमा समूहको २ दशमलव ८५ प्रतिशत, म्युचुअल फण्डको १ दशमलव शून्य ३ प्रतिशत र लगानी समूहको ३ दशमलव १ प्रतिशत घटेको हो ।
पछिल्लो समय परिसूचकसँगै कारोबार रकममा पनि कमी आएको छ । दिनानु दिन बजार घटेसँगै क्रेता र विक्रेता पर्ख र हेरको अवस्थामा रहँदा कारोबारमा रकम घटेको देखिन्छ ।
यसो त अब लाभांश सिजन शुरु भइसकेको छ । कम्पनीहरुले लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गर्न थालेको छन् । कम्पनीले विगतमा प्रदान गर्दै आएका कम्पनीमा लगानी गरेमा अल्पकालिन भन्दा पनि दीर्घकालिन राम्रो प्रतिफल प्राप्त हुने देखिन्छ ।
प्रि - ओपन सेसनमा ०.०१ अंकले घट्यो नेप्से परिसूचक [२०७८ कार्तिक, ७]
पहिलो त्रैमाससम्ममा वेष्ट फाइनान्सले कमायो रू. १२ करोड ११ लाख नाफा [२०७८ कार्तिक, ७]
मिर्मिरे लघुवित्तको सीईओमा पुष्कर राज जोशी नियुक्त [२०७८ कार्तिक, ७]
कुमारी बैंक र शिवम् सिमेन्टको लाभांश सुरक्षित गर्ने आज अन्तिम दिन[२०७८ कार्तिक, ७]
सांग्रिला डेभलपमेण्ट बैंकको १९ हजार ८२७ संस्थापक शेयर विक्रीमा[२०७८ कार्तिक, ७]
यो साता ८२.४२ अंकले घट्यो बजार : कारोबार रकम साढे १३ अर्बमा सीमित[२०७८ कार्तिक, ६]
०.५७ % ले घट्यो नेप्से परिसूचक, २ अर्ब ६३ करोड बराबरको शेयर खरीदविक्री[२०७८ कार्तिक, ४]
एनआईसी एशिया ब्यालेन्स फण्डसहित ५ ओटा धितोपत्रमा उच्च खरीद माग[२०७८ कार्तिक, ४]
सानिमा बैंकको सर्वाधिक रू. ६ करोडभन्दा बढीको शेयर खरीदविक्री [२०७८ कार्तिक, ४]
व्यङ्ग्यार्थ : आइतवार, ७ कात्तिक २०७८
तस्वीर : सप्तरीको मेनाकडेरीमा निर्माणाधिन पक्की पुल